China Pineapple Fabric Bag Kusvibisa Yemahara Natural cosmetic Makeup Bhegi Kupakata kwe Unisex yeKufamba fekitori nevatengesi | Changlin
Kugadzirwa Kwekutarisa: JF20-22
Zvinhu: chinanaini rineni Kurema: 76g
Saizi: L16 * W5 * H14cm Kuvhara: zipi
Nzvimbo yeKutanga: GUA, CN Chiteshi: ShenZhen 、 Guangzhou 、 HongKong
Kubatsira: zvakasikwa, zvinogadziriswazve, zvinogadzikana, eco-hushamwari, kusvibiswa mahara
Pineapple jira, chinanazi shizha faibha, inowanzozivikanwa seinanazi fiber, ndiyo faibha yakabviswa pamashizha epainapple, ari etsinga fiber, iyo inogona kuburitswa nemakemikari, biology uye mechina nzira. Iyo faibha yakaburitswa nemuchina nzira ndeye mhando yakanaka uye yechisikigo uye isina kusvibiswa. Izvo zvave zvichiratidzwa kuti pineapple hemp ine zvakasikwa bactericidal uye bacteriostatic zvinhu, izvo zvinogona kunyatso kuuraya mabhakitiriya uye kudzivisa kukura kwefungus uye microorganisms. Iyo mhando yeakanyanya echisikigo hutano hwekuchengetedza machira machira ane akakosha Ultra-akanaka pore mamiriro mukati meiyo fiber dhizaini uye kugona kugona kupinza uye kupwa mvura nekukurumidza.
Pineapple fiber ndeye yakasikwa, inogadzikana-yakasungwa, hutsinye husina chinhu.Iyo inogadzirwa nemarara mashizha emuti wepainapple. Mashizha aya ndeechigadzirwa kubva kukohwa chinanazi chiripo, saka mbishi haidi chero zviwanikwa zvekuchengetedza.
Chinanazi chemashizha fiber, icho chiri chehempe shinda tambo, is fiber inotorwa kubva paminanazi mashizha. Inogona kusanganiswa neakasikwa tambo kana synthetic fibers. Kudhinda kuri nyore uye kudhaya, kufema, isina-nyore makwinya, kugadzikana, eco-hushamwari.
zvakasikwa zvinhu, zvakapfava kugadzikana kwekubata
Pashure: Eco-inoshamwaridzika Rineni Cotton Bhegi Yekuzora homwe Yekufamba Simuka Homwe Yakavanzika Label Makeup Bhegi
Zvadaro: Natural Jira reusable cosmetic maketi bhegi kurongedza kwe Unisex yeKufamba